Umhla My Pet » 3 Tips Ukuze Yenza The Best Online Dating Yabucala
ukubuyekezwa: Nov. 18 2020 | 2 min ukufunda
Ukumisela iprofayili ukuthandana online kunokuba omabini Ukuphama kunye ingcamango enkwantyisayo zonke ngexesha elinye. Imincili ngokucacileyo iphuma ingcinga yokuba mhlawumbi nje usenokudibana ukuba nomntu ngokusebenzisa intanethi obonakala umda-ngaphantsi. Ukududuzelisa livela ingcamango emangalisiwe kanye ukubeka kwiprofayile yakho. Ukuba ufana abantu abaninzi, ungafuna ufuna ukubeka phambili umelo kakuhle ngokwakho, kodwa nje andazi njani loo nto. Echaza wena kunokuba nzima kwaye ayilandeleki. Nangona oko kusenokubonakala isuntswana ngathi ubhala ileta yesicelo somsebenzi ibe, inyani kukuba uzama ngokwenene ukutsala weveki-kungekhona enokwenzeka kubaqeshi ezinokwenzeka! Ngenxa yobunzima ngokudala iprofayili ukuthandana online, kukho iinkampani eneneni uzibophelele kwenye injongo-ukuba ukubhala profiles intanethi ukuthandana. ngethamsanqa, kukho iindlela ezininzi ukuba unako ukwenza iprofayili eyakho / "ngam" icandelo umdla kakhulu, ngaphandle kokuba uhlawule "oqeqeshiweyo" ukwenza yona.
Xelela Amabali: Mhlawumbi enye yezona iingcebiso ibalulekileyo iprofayile-mbhalo ukuba ukukhumbula, ukubalisa amabali kwiprofayile yakho ngokuqinisekileyo yindlela esiqinisekisiweyo ukuzoba abantu ukuba umnqweno ubuncinane ukufumana ukwazi ngakumbi ukuba. Iingxelo ezifana "Mna intle, ukonwaba, guy wokufuna "oluthile aze okunene kunokukutyhila encinane kakhulu umntu. nokuba, ngokukhetha ukunika bhalo emfutshane ukumela ngasinye kwezo nkcazelo ziya kukwenza ngokubonakalayo ingenakulibaleka nesinika umdla. (Umzekelo, "Ngenye imini ngoxa emaphandleni Ghana ..."). Kanjalo, ke isitshixo ukuba uzigcine ezi amabali amafutshane; akuyi kuphela kugcine iprofayile yakho ngokulula efundeka, kodwa kunika ithuba elihle ngesihloko incoko zomhla yakho ("... Ngoko ndithi okungakumbi xesha ..."). Enye indlela yokwenza oku kukuba kukunika imizekelo ethile iingxelo elula oluthile. Njengokuba, esithi: "Ngenye imini Kusenokwenzeka ukuba ube wam iimbambo Utyikityo zeBBQ kwaye coleslaw" na ingenakulibaleka ngakumbi personable kunokuba bathi, "Ngokwenene Ndithanda ukupheka phandle amukerile yam."
Cela Imibuzo: Elandele zendalo ukuya kwinqanaba lokuqala, qinisekisa ukuba iprofayili yakho ukuthandana ibonelela ngamathuba abanye ukuba babuze imibuzo. Nokuba ngokungqalileyo (njengoba, "Uze ungoyiki ukubuza kum ngakumbi ...") okanye nje lwabaNtsundu ezingachazwanga, iprofayili ukuba umema yophando iinkcukacha ezithile ngawe ibonisa ukuba olungafihlisi, imema umntu kwakunye. Ngamanye amazwi, ukuba isimbo ukuba iprofayile yakho kubhaliweyo izandi epheleleyo ngokugqibeleleyo kwaye wawuyi, ngoko abanye basenokucinga ukuba yiloo ndlela kakhulu. Gcina iinketho zakho ukuthandana Vula yixina ngathi evulekileyo, imema umntu ngokwakho.
Nyaniseka: ekugqibeleni, ukunyaniseka Lizicacele elokuba nto ibalulekileyo nayiphi amava ukuthandana yimpumelelo, nokuba intanethi okanye. Ukuba iprofayile yakho ibhalwe ngendlela ukukuchaza amava okanye "ubuchule" ukuba nje uyazibax bobukho, abanye ukubukela iprofayile yakho mhlawumbi uza kuba nako ukuxelela okanye kam-. unxibelelwano embi soze unyawo elilungileyo ukuqala ngalo. nokuba, oku akuthethi ukuba kubaluleke gqitha ukuba kubekho ukudandalaziswa ngokupheleleyo ngokuphathelele yonke lezifundiswa zakho asethi online mhlawumbi. Njengokuba, engafuni ukuba atyhile umsebenzi wakho ngoku ngenxa uloyiko ukuba abanye kufuna ukuba ukuthandana uyiyeka ingeniso yakho sizathu sisebenzayo zikarhulumente kuphela, "Xa kwezonyango" endaweni "Ugqirha wamathambo" kwi inkcazelo yobuqu. Kule meko, yenziwe akukho malinge ke ukuba nina isandi 'elunge' eziyinyani.
Indlela Ukuthandana kwiFacebook